Madodakazi engabadi: Umzabalazo uyaqhubeka – Msunduzi News
Izishoshovu zabesifazane ezisezingeni eliphakeme zeNhlokodolobha zicele izishoshovu zabesifazane abasha zifinqe imikhono
NJENGENGXENYE yokugubha iNyanga yesiBhuda, iMsunduzi News idle indlebe ezinye zezinkakha zesibhuda zomzalazo ababeka ngokuthi isibhuda sanamhlanje asibhekene nje kuphela nokufuna amathuba alinganayo nabesilisa, kodwa futhi kunomzabalazo omusha mayelana nokungashawa ndiva kwezinkinga zomphakathi. Ekubungazeni iNyanga yesiBhuda, uMsunduzi News ukhulume nabesifazane abangomakadebona abakhale ngokuthi ngaphezu kwemizabalazo ebhekene nabesifazane yokulwela ukulingana nabesilisa, sekunomunye umzabalazo wokuthula ngezinkinga ezikhungethe imiphakathi.
Ekhuluma ngeqhaza labesifazane emzabalazweni wenkululeko nesimo sabesifazane ezinsukwini esiphila kuzo, umakadebona emzabalazweni uNana Mnandi uthe yize ayengeyona ingxenye yenhlabaluhide yabesifazane ngowe-1956 kodwa abesifazane baseMgungundlovu babamba elikhulu iqhaza ekulweni nengcindezelo njengoba basebenzisa ukuhlangana kwabo babe yimbumba ukuze babhekane neziphathimandla zezwe. Emva kokubulawa kwentsha ubusuku nemini wuhulumeni wobandlululo, kwadingeka bahlangane bengabantu besifazane baqala umasingcwabisane ngoR2 ukuze bangcwabane ngendlela enesithunzi. Uphinde watusa kakhulu iqhaza lika “Mama Wesizwe” ongasekho uWinnie Nomzamo Madikizela-Mandela owayeyinsika yethemba kubo ngalezo zikhathi.
“Njengoba ngigubha inyanga yabesifazane nje, umoya wami wephukile ngoba ngibona sengathi ukuzikhandla kwalawa maqhawe kwaba yize leze. Ngesikhathi somzabalazo uma sinokuthile esingeneme ngakho singabantu besifazane, sasihlangana sibe yimbumba, sikhukhule sibheke emahhovisi eziphathimandla siyobeka izikhalo zethu. Intsha yabesifazane kulezi zinsuku ithule kakhulu kube kunezinkinga ezinkulu okufanele engabe babhekana nazo emphakathini. Ngezikhathi zethu kwakubusa kakhulu ubumbano nokuthanda izwe lethu ngaphezu “kwepolitiki yesisu” esidlange kulezi zinsuku. Ngifisa sengathi abaholi bepolitiki besifazane bangake bayofunda izincwadi zomlando ukuze bazikhumbuze ngokubaluleka kwalolu suku baqonde neqhaza labesifazane ekulwisaneni nezinselelo ezisuke zibabheke emehlweni. Kulezi zinsuku yimali kuphela into eyaziwayo. Yize lelizwe selihambe ibanga ekulinganiseni abesilisa nabesifazane kusekuningi okufanele kwenziwe ngoba amadoda asabuka abesifazane abanokuzethemba, isibindi nokuhlakanipha njengabaziphakamisayo nabangafanele ukuba sezikhundleni zobuholi.”
UMnandi uphinde wakhala ngokuthi yize abesifazane bebe neqhaza elikhulu embuthweni wenkululeko, amagama abo esuliwe emlandweni. “Sinabesifazane abazabalaza okungoKhopha Masuku waKwaMachibisa owabulawa ngesihluku uhulumeni wobandlululo, kunoBuyi Xulu wase-Ashdown, uJabu Ndlovu wase-Imbali kodwa, ngaphandle kukaJabu Ndlovu laba abanye abatholakali ndawo ezincwadini zomlando,” kuphetha uMnandi.
Ngaphansi kwendikimba: 25 Years of Democracy: Growing South Africa together for Women’s Emancipation”, ziyi-9 kuNcwaba kulonyaka izwe ligubhe iminyaka engama-63 selokhu izinkulungwane zabesifazane zahlaba uhide zabheka e-Union Buildings ukuyozwakalisa ulaka ngokuphathwa kwamapasi. Uma sihalalisa iqhaza lalaba besifazane abakhethekile nabanesibindi bangowe-1956 okwathi ngokuhlangana babe yimbumba balwisana namapasi ayelawula ukuhamba kwabo kwansukuzonke, izinkulumo ezikhthazayo neziqubulo ezifana naleso esithi “Wathint’ abafazi wathint’imbokodo” kuzobe kuphezulu yonke le nyanga.
Yize ucwaningo lukhomba ukuthi abesifazane eSouth Africa sebehambe ibanga elide ekulinganisweni nabesilisa, kodwa uNgqongqoshe Wabesifazane, iNtsha Nabaphila Nokukhubazeka eHhovisi likaMengameli uMaite Nkoana-Mashabane ukhala ngokuthi abesifazane abakanikwa amathuba afanayo nawabesilisa uma kuziwa kwezemfundo, imisebenzi namaholo.
Lowo owayeyilungu le-ANC ePhalamende nomzabalazi uHappy Blose uzwakalise imizwa efanayo yokuthi abesifazane abasangeni kupolitiki ngenhloso yokusiza labo abangenamandla okuzisiza. Ezikhulumela uthe: “Emva kwedemokhrasi, umzabalazo wabesifazane usufana nento efile. Ngezikhathi sasingadingi mali ukuze silwisane nezinkinga ezazikhungethe abantu bakithi, kodwa sasihlangana sibe yimbumba singabantu besifazane. Ngiyakhumbula nje ukuthi ekhaleni lomzabalazo kwakuyimina, uLulu Gwala, uNana Mnandi, uSibongile Mkhize noDkt uMakhosi Khoza. Uma kwakunento engahambi kahle ethinta umphakathi, sasingadingi mvume yamuntu kodwa sasihlangana singabantu besifazane. Noma ngabe sisola ukuthi kunokuhlukumezana emndenini sasihlangana simqonde ngqo umhlukumezi. Abantu besifazane banamuhla baphelelwe wumdlandla wokulwisana nezinto ezinzima ezihlupha umphakathi. “ UBlose uphethe ngokuthi yize izimo seziguqukile abesifazane sebebambe izikhundla eziphezulu, abesilisa basakhombisa ukuba nenkinga ngowesifazane onezimpawu zokuhlakanipha nesibindi. Laba besifazane bazithola besatshiswa futhi bengavunyelwa ukukhuluma ngokukhululeka ezikhundleni abasuke bezibambile.
URabia Motala, oyisishabasheki sezepolitiki nonyinkosikazi walowo owayelwisana nobandlululo uDkt uChota Motala uthe yize abesifazane bangowe-1956 baba ngamavulandlela ekukhululekeni kwabesifazane, abesifazane balesi sikhathi banejoka lokuqhuba umzabalazo owaqalwa yilawa makhosikazi wokukhululwa ngokuphelele kwamakhosikazi. “Yize abesifazane sebenamathuba angcono emva kwedemokhrasi, kusekuningi okudinga ukwenziwa wuHulumeni waseSouth Africa. Kuningi osekwenziwe kodwa asikafiki lapho sesingathi khona abantu besifazane sebekhululekile. Nokho siyethemba ukuthi kuyogcina kwenzekile,” kuphetha uMotala.
ULuhle Ndlovu, uNobhala weSACP kuMgungundlovu District noyindodakazi kasonyunyana ongasekho uJabu Ndlovu uthe ukucindezeleka kwabesifazane kathathu ngokobulili, ubuzwe nangokwezinga lokuphila okwakukhona ngaphambi kwedemokhrasi kusekhona nanamuhla. Umehluko yindlela abesifazane banamuhla asebelwisana ngayo nalesi simo. Uthe, “Abesifazane babebhekene nezinkinga zokubandlululeka kungekho nqubomgomo ebalekelelayo. Namuhla kwehlukile yize inqubomgomo nayo inqubomgomo isesekela ngegama kuphela nje. Abesifazane banamuhla abasenakho ukuzinikela okwakukubantu besifazane bangaleziya zikhathi. Babesombulula izinkinga beyimbumba kanti thina siyinhlakanhlaka sisebenza ngasodwana. Abesifazane balezi zinsuku banomkhuba wokuvalela abanye ngaphandle njalo uma sekwaneliseke bona. Ukuba yindodakazi yomuntu owayesebenza ngokuzidela, elwela abasebenzi, engaholi namali etheni, kungifundise kabanzi ngeqhaza lami lokuba ngumholi wesifazane,” kuphetha uNdlovu.
Izinkinga zamanzi nenhlanzeko ziyalandelwa
Previous post: Uhlu lwamanani loMsunduzi seluyaqala
Next post: Ukwaziswa nokuhlonishwa: Abesifazane ebuholini